Shiinaha Customized Copper Copper Qaboojiyaha-saareyaasha, Warshad - Dongguan Guancheng qirayso Hardware Co., Ltd.
Hoyga > Kulaylka Kulaylka > Kuleylka kuleylka naxaasta ah
1. Astaamaha: hiitarka oo lagu daro faa iidooyinka naxaasta iyo aluminium, adoo adeegsanaya mabda'a balaarinta kuleylka iyo qabowga qaboojinta, kuleylka kuleylka kuleylka ee aluminium, ka dibna ku rida naxaas, ka dibna qaboojinta guud. Waqtigan xaadirka ah, badanaa waxaa jira laba siyaabood: ku xir tiirarka naxaasta iyo aluminium hoose oo leh xaashi naxaas ah.
Sababtoo ah ma jiraan wax dhexdhexaad ah oo saddexaad, hiitarka naxaasta wuxuu si weyn u yareeyaa caabbinta kuleylka ee dusha sare ee xiriirka, kaliya laguma daro isku-xirnaanta naxaasta iyo aluminium, laakiin sidoo kale si buuxda u isticmaal kala-baxa kuleylka degdegga ah ee aluminium, sifooyinka nuugista kuleylka degdegga ah. , Saamaynta baahinta kuleylka, waa mid ka mid ah noocyada hiitarka guud ee suuqa.
2. Faa'iido daro:
Naxaasku wuxuu leeyahay qiimo qaali ah wuxuuna u baahan yahay teknolojiyad cadaadis wanaagsan si loo xakameeyo farqiga u dhexeeya.
3. Awoodda geedi socodka: qeexida alaabtu ma xadidna, badiyaa hiitarka muuqaalku wuxuu furi karaa xajmiga 550 (ballaaran) * 150mm (sare)
Calaamadaha kulul: Kuleylka kuleylka Copper, Shiinaha, Gawaarida, Soo-saareyaasha, Warshad